Posted by coral nyo at 06:11
ကြိုင်ပျံ့ရှား ၊ စကားဆီကနှောင်
ငယ်ငယ်က မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)တို့ မိုးမိုး(အင်းလျား)တို့ရဲ့ မိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကဗျာတွေ ဖတ်ဖူးတယ် အဲဒါတွေရှာပြီး ထပ်တင်ပေးဦးမယ်
31 July 2009 at 02:00
အပဲာ . . .ကျွန်တော်က ဘလော့တွေ လျှောက်ဖတ်နေတတ်တဲ့ လူတယောက်ပါ.
ကောင်းတာဆိုးတာ . .ဝေဖန်တာတော့
အားပေးးလျက်ပါနော်. . .